प्रकाशित: मंगलबार, जेठ ११, २०७८, ०६:१३:०० सुनीता अर्याल
म निदाइहालेँ भने मेरा अनगिन्ती आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, प्यारा साथी र प्रिय आफन्त अस्पतालको शय्यामा छट्पटाउने छन्।
उपचारमा खटिएकै बेला कोरोना संक्रमित भएर आउनु भएकी एक जना वृद्ध आमाले भन्नु भयो, 'मेरो आशीर्वाद छ तिमीहरूलाई। रातदिन नभनी खटिएका छौ।' तर थाहा छैन ती आर्शिवादका हातहरू कहिलेसम्म!!!
लामो समय भइसक्यो न भोक लाग्छ, न तिर्खा। आफूभन्दा पहिला संक्रमित बिरामीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन स्वास्थ्यकर्मीका हात कहिल्यै पछि परेनन्। आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी भएकोले घरभन्दा प्यारो अस्पताल बन्न पुग्यो। घर छोड्न सकियो तर अस्पताल छोड्न सकिएन। संक्रमितलाई, संक्रमितको परिवारलाई, समाजलाई र देशलाई मेरो खाँचो छ। यस्तो बेला म कसरी मजाले निदाउन सक्छु? कति आशा बोकेर आएका ती बिरामीलाई सजिलो महसुस गराउन पाए भोलिका दिनमा मिठो निन्द्रामा डुब्न सक्छु होला भन्ने लागिरहन्छ। कसैले छुन डराउने विशुद्ध आत्माका धनी संक्रमित छट्पटाइरहेका बेला शान्त्वना दिँदै 'म छु नि!' भनेर हातमा हात मिलाउँदै सङ्क्रमणमुक्त बनाउने अठोट लिएकी छु। त्यसैले मैले मेरो निद्रालाई थाती राखेकी छु।